विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसः कोरोनाको संकटपछि आत्महत्याको अवस्था - NayaNepal News
Home विचार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसः कोरोनाको संकटपछि आत्महत्याको अवस्था
आत्महत्या बिश्वब्यापी रुपमा नै जठिल समस्या बन्दै गएको छ । आत्महत्या रोकथाम तथा यस बिषयमा जनचेतना बढाउने उदेश्यले प्रत्येक बर्ष 10 sep का दिन बिश्व आत्महत्या रोकथाम दिबस मनाउँदै आएको छ । यस बर्ष पनि यो दिबसको नारा ” आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य” रहेको छ ।यो बर्ष कोरोनाको संकट र लकडाउनले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक , आध्यात्मिक, आर्थिक जस्ता सबै पाटोलाई असर पुर्याएकोछ । यसले सबै तह, तप्का, उमेर र समुदायका ब्यक्तिलाई प्रभाव पारेकोछ। यस संकट पछि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो ! आत्महत्याको अबस्था भयावह हुँदै भन्ने जस्ता समचार हिजो आज आईरहेकाछन । आत्महत्यालाई कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ। तर आत्महत्या अहिलेको मात्र समस्या भने होइन ।
प्रकृतिक बिपत्ति पर्दा, रोग ब्याधि फैलिदा जस्ता असहज र जोखिम पुर्ण अबस्थामा मानसिक रोग तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम भने हुन्छ । त्यसैले आत्महत्या लकडाउन पछिको मात्र समस्या हो । लकडाउन पछि भयावह भएको छ , पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो । लकडाउन भन्दा पहिले र लकडाउन पछिको तुलना गर्ने हो भने खासै फरक देखिदैन। तर बढदै जाने संकेतहरु भने देखा पर्न थालेका छन । बालबालिकामा भने यो बिचमा आत्महत्या गर्ने दर बढेर गएको देखिन्छ। जुन दुखद हो । आत्महत्या एकदमै संबेदनसिल बिषय हो ।
आत्महत्याको समचारलाई अतिरन्जित र सनसनी पुर्ण बनाउनु हुदैन । यसले समाजमा झनै नकारात्मक असर पुर्‍याउछ। डिप्रेसनमा रहेका र आत्महत्याको सोच बनाएकाहरुमा आत्महत्या गर्ने आँट बढछ । बालबालिकाहरुले त्यसको सिको गर्न सक्छन् । आत्महत्या नेपालको मात्र समस्या पनि होइन । यो बिश्वकै साझा समस्या हो। विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्माहत्या गर्छ भने प्रत्येक ३ सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछ । एक आत्महत्या हुँदा पच्चिस व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरिसकेका हुन्छन् र धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न गम्भिर रूपमा सोचेका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष बिश्वमा सरदर ८ – १० लाख व्यक्तिले आत्महत्याबाट आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेका छन । यो संख्या युद्ध, दैवी प्रकोप, सडक दुर्घटना, महामारी लगायतका कारणहरूबाट हुने मृत्यु भन्दा धेरै हो । विश्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरुले बढि आत्माहत्या गर्ने गर्छन । तर आत्महत्याको प्रयास भने पुरुषमा भन्दा महिलामा बढि देखिन्छ ।
जसरी कुनै कुनै शारीरिक रोगमा केही ब्यक्तिहरु उच्च जोखिमा हुन्छ । त्यसै गरि केही ब्यक्तिहरु मानसिक रोग र आत्महत्याको हिसाबले केहि उच्च जोखिममा हुन सक्छन । जस्तो मानसिक रोग डिप्रेसनमा रहेको , कुनै दुखद घटनाले धेरै प्रभावित, पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको, तनाब पुर्ण पेशामा भएकाहरु, पारिबारिक झै – झगडा , आर्थिक संकट भएका, बिरोजगार , लाँगू प्रदार्थक कुलतमा फसेका आदि । मानसिक रोग जोसुकैलाई लाग्न सक्दछ । मानसिक रोग र आत्महत्यालाई हाम्रो समाजले फरक रुपमा लिन्छ । फरक तरिकाले बुझ्छ । मानसिक रोगलाई पुर्ब जन्मको पाप र अपराध ठान्छ । देबि देवता कुल देवता बिग्रेको भन्छ । आत्महत्या गर्नेलाई समाजले पानी मरुवा, लाछीको उपमा दिन्छ । आत्महत्या गर्नेको अनुहार हेरियो भने अगति परिन्छ भनेर अनुहार लुकाउँदै र नाक खुम्चाउँदै हिँड्नेहरू पनि हाम्रो समाजमा भेटिन्छन् । आत्महत्या गर्नेको परिवारमा अरु व्यक्तिहरूको आउजाउ कम हुने तथा पानी बाराबारसम्म गरेको पाइन्छ । मानसिक रोग तथा आत्महत्याप्रतिको गलत बुझाई धारणा र सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
Previous articleनिषेधाज्ञा खुकुलो, कुन बार के गर्न पाइन्छ थाहा छ ?
Next articleनेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५० हजारभन्दा धेरै, ३१७ जनाको मृत्यु
त्यो कांग्रेस यो कांग्रेस
लोकतन्त्र हो की भूमाफिया तन्त्र ?